Hacking & Web Security - Imiba exabisekileyo evela kwi-Semalt
Ukuqhaqhaqhayisa kuba yinto eqhelekileyo ejongene nabasebenzisi abaninzi be-intanethi namhlanje. Kubantu abanayoI-intanethi ye-intanethi, ukuhlala kude nabahlaseli ngenye yezindlela ezifanelekileyo zokuqinisekisa ukhuseleko kwisayithi lakho. Nangona kunjalo, siyahluleka ukubeka le ntoengqondweni xa senza izicwangciso ze-web design yethu. Uninzi lwezoqoqosho zentengiso ezinkulu kwiinkqubo zokuthengisa kwi-intanethi njenge-Injini yoseshoUkucwangcisa (SEO) kunye nezicwangciso zokuthengisa izinto. Nangona kunjalo, kubalulekile ukubandakanya ezinye iimpawu zoyilo ukuzenzekelayoukhuseleko kubarhwebi. Amanyathelo anjalo anokuqinisekisa ukhuseleko kwiintwendwe zakho xa ziphengulula ngewebhusayithi yakho - ubiquiti rocket prism 5ac gen2.
u-Andrew Dyhan, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt ,ichaza iindlela ezithile zokuqhawula kunye nezindlela zokuzisombulula.
Ayikho imeko ebonisa iplani ye-bulletproof ukuqinisekisa ukuzinza kwe-aindawo. Nangona kunjalo, kukho imilinganiselo apho abantu bangayithatha kwaye benze yonke inkqubo iphephile. Ezinye zeendlela ziquka ezi zilandelayo:
Ukusebenzisa iiphasiwedi ezinamandla kubalulekile. Unokuthintela ukuba unqabile ukufikelelalakho lewebhu ngokusebenzisa iphasiwedi ephephile. Amaphasiwedi anjenge-12345 kunye namagama abantwana angenza ezinye iziphakamiso zomsebenzi wokuqagela kwanoma yimuphi umntungenjongo yokugula. Ngenxa yoko, kubalulekile ukusebenzisa iphasiwedi engabonakali nabani na onokuyicinga..Ukutshintsha iphasiwedi rhoqounokwenza umlinganiselo wokukhusela okongezelelweyo kwiwebhusayithi, ukwandisa ukhuseleko lwabo ngokubanzi. Kwelinye uvavanyo, umntu unokusebenzisa iphasiwedi ephephileiijenerethi ukwenzela ukuba ukhuseleko lwabo luqine.
Ezinye zeendlela eziqhelekileyo zokuqhawula zifuna i-HTTPS elula ukuba ibenqande. Umbhalo okhuselekileyoIdluliselo lweProtokholi ekhuselekileyo yenza ukuba utshintshiselwano olukhuselekileyo lweenkcukacha phakathi komncedisi wewebhu kunye nesiphequluli. Le ndlela inikezela ubume obunqabileyo bokukhuselazeziphi i-hacks ezilula kunye ne-spoofs azikwazi ukungena. Ukuhlaselwa okuqhelekileyo ongayinqanda ukusebenzisa i-HTTPS kubandakanya i-Cross Site Scripts kwakunye ne-SQLinjections. Ezi ndlela zisebenzise ukukhuseleka kwekhowudi yewebsite kunye nohlobo lomncedisi.
Iidyuli kunye nokuPhepha
Abagaxekile ngaba bantu bathumela imiyalezo eminingi kunye ne-imeyile ukuze bangaboniamaxhoba. Isizathu esivela kwiindidi zezi zihlaselo zidla ngokucacileyo, ukubonisa abantu abaninzi kwizandla zabahlaseli. Ezininzi ze-intanethizenzeka ngoncedo lwabagaxekile. Unokutshintshela kwi-imeyile ye-imeyli ekhuselekile ukufumana ukukhuselwa okuninzi malunga ne-imeyli e-spam enkulu. KwezinyeKwiimeko, unako ukukhusela ukuhlaselwa kwale miyalezo ngokusebenzisa izihlungi eziphambili ze-spam.
Intanethi inabantu benza zonke iintlobo zezinto. Ingcinga efanelekileyo yokwenza ezahlukeneyoutshintsho xa ukhetha iwebhusayithi yakho. Hackers basebenzise ukungakhuselekanga okukhoyo kwikhowudi yesayithi kunye ne-serverngokwayo. Ukhuseleko lwewebhusayithi kunye nolwabantu abalusebenzisayo kuxhomekeke ekusebenzeni kweendlela zokulwa nokucima. NjengeNgenxa yoko, kubalulekile kubo bonke abashishini ukuba bakhusele inhlalakahle kunye nokukhuselwa kwe-intanethi kwi-website yabo. Esi sikhokelo sinaloubuchule obuphambili obuya kwenza ukuba indawo yakho izuze inzuzo eninzi. Unokwenza utshintsho olunye kwaye ukhulise ukhuselekoyakho indawo kakhulu.